အီးမေးလ်ပို့ရန်ပံ့ပိုးမှု [email protected]-jacket.com
Foshan Ruiniu အဝတ်အစား Co. , Ltd မှ. Nanhai မှာတည်ရှိပါတယ်, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ, ထုတ်လုပ် downjacket အတွက်အထူးပြုတဲ့အစွမ်းထက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်, hardshell ဂျာကင်အင်္ကျီ, softshell ဂျာကင်အင်္ကျီ,3 1 မှာ, windbreaker,တေးသံဂျာကင်အင်္ကျီ,နှင်းလျှောစီးဂျာကင်အင်္ကျီ,ပြင်ပကိုယ်တော်ကိုဟစ်ကြော်,စသည်တို့ကို.
We provide our customers with the following services: sample development, fabric and accessories procurement, printing and embroidery, laser seamless and other integrated services throughout the production supply chain.We also provide OEM and customization services for enterprises at home and abroad,နှင့်ကျော်ကြားသောအဝတ်အစား၏နံပါတ်ထိုကဲ့သို့သော NAPPING အဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်,ရှစ်ဆယ့်ရှစ်,စသည်တို့ကို.
1.We areasource manufacturer of down jacket and outdoor clothing such as windbreaker, နှင်းလျှောစီးအောက်ပါအတိုင်း, စသည်တို့ကို. for 20 years. Technology in the industry is come out in front.